युद्धका कारण तहसनहस भएको अफगानिस्तानलाई प्रकृतिले पनि ठग्यो, हातले पन्छाएर उद्धार !
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » युद्धका कारण तहसनहस भएको अफगानिस्तानलाई प्रकृतिले पनि ठग्यो, हातले पन्छाएर उद्धार !
काठमाडौं । दशकौँको आन्तरिक युद्धका कारण तहसनहस भएको अफगानिस्तान प्राकृतिक विपत्तिको चपेटामा परेको छ । बुधबारको भूकम्पले देशका धेरै भूभाग क्षतविक्षत भएका छन् ।
दश महिनाअघि उत्तर एटलाण्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) र अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै देशको स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त भएको छ । तालिबान शासन शुरू भएयता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोग पनि लगभग रोकिएको छ ।
भूकम्प पीडितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताका निम्ति आह्वान गरेका छन् । उनीहरूले भग्नावशेष हातले पन्छाएर पुरिएकाहरूलाई जीवितै उद्धार गर्न कठिन हुने पीडादायी परिस्थितिबारे जानकारी पनि गराएका छन् ।